आफ्नै ज्वाइँ को मलामि जाँदै गर्दा ट्रकले हानेर सबै जिप पुरै क’च्याककु’चुक पारिदिएपछि सबै परिवारनै कोहि पनि बा’च्न पाएनन् – Sandesh Press
आफ्नै ज्वाइँ को मलामि जाँदै गर्दा ट्रकले हानेर सबै जिप पुरै क’च्याककु’चुक पारिदिएपछि सबै परिवारनै कोहि पनि बा’च्न पाएनन्
May 28, 2021 599
मोरङ जिल्लामा एकदमै डरलाग्दो घ`टना घटेको छ। जहाँ एकै परिवारका सबै सदस्यहरुको मृ’त्यु भएको छ । कस्तो संयोग अथवा दशा भइदियो ।आफ्नै ज्वाइँ को मलामि जाँदै गर्दा ट्रकले हानेर सबै जिप पुरै क’च्याककु’चुक पारिदिएनपछि कोहि पनि बा’च्न पाएनन् ।
एकातिर आफ्नै ज्वाइँ बितेर अथाहा पि’डामा भएको परिवार अर्कोतिर आफ्नो सबै परिवारनै यो निर्मम ढंगबाट सकिदा नि’श्चय पनि भाग्य र दै’वको खेल देखेर पनि एकदमै उदेक लागेर आउँछ । यो परिवारको काल गति नभई यो तबरमा अन्त्य होला भन्ने निश्चय पनि सोचेका थिएनन् होला
ट्रिफर र ट्रक एकदमै ठूलो गति र मनलाग्दि तरिकाले चलाउने हुदा पनि यस्तो घटनाहरु बेला बखत मा हुने गर्दछ्न । उनिहरु उपर कडा ऐन र कानुन बन्न जरुरि छ । यस्तो घ’टना हरु नि उनि करणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न समेत जरुरि छ । मृ`त आ’त्माको चिर शा’न्ति सहित शो’का कुल आफन्तजनमा ग’हिरो स’मबेदना
ट्रिफर र ट्रक एकदमै ठूलो गति र मनलाग्दि तरिकाले चलाउने हुदा पनि यस्तो घटनाहरु बेला बखत मा हुने गर्दछ्न । उनिहरु उपर कडा ऐन र कानुन बन्न जरुरि छ । यस्तो घ’टना हरु नि उनि करणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न समेत जरुरि छ । मृ`त आ’त्माको चिर शा’न्ति सहित शो’का कुल आफन्तजनमा ग’हिरो स’मबेदना*** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Prevदाजु हजुरको यो हसिलो मुहार कहिलै नदेखाउने गरि सन्सार छोड्नु भयो सुन्दा बिस्वास पनि लागिरहेको…
Nextबिहीबार राती भेरी अस्पतालमा के भएको थियो ? हामफालेर ज्यान जोगाएकी नर्सको बयान
सम्पूर्ण देशवासीको लागि अत्यन्तै दुखत खबर,सबैले हेर्नैपर्ने?
एक डोज मात्र लगाए पुग्ने अमेरिकाको खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने, तर कसले पाउँछन्?